यसरी दक्षिणमा दलदल, उत्तरमा पानीको ताल, पूर्वमा समुद्रजस्तै फैलिएको शोण नदी हुनाले अमरकंटक क्षेत्र पुग्न पुलबिना सम्भवै छैन । त्यसकारण लंका पुग्न रामले पुल नबनाईकन धरै थिएन (डा. हीरालाल, पृष्ठ. १५८) । केही विद्वान्हरूले रामायणमा प्रयोग भएको ‘नलसेतु’ शब्दको अर्थ ‘नलले सेतु (पुल)’ बनाए भन्ने लगाएका छन् । तर, यो सही अथ्र्याइ होइन किनभने ‘नल’ ले ‘सेतु’ (पुल) बनाएका भए रामायणमा ‘नलम् सेतुम–करयत’ भनेर लेखिनुपथ्र्यो । ‘नलसेतु’ शब्दले ‘साँगुरो नहर’ भन्ने मात्र अर्थ दिने भएकाले (एच.डी. संकालिया, पृष्ठ १४९) खासमा साँगुरो नहर तरेर रामका सेनाहरू लंका प्रवेश गरेका थिए ।
प्रकाशित : असार १३, २०७७ ११:१९